होसियार ! बुढेसकालको अनुहार हेर्ने ‘फेसएप’ चलाउदा पछुताउनु पर्ला है ! - Mitho Khabar
January 30, 2020 mithokhabarLeaveaComment on होसियार ! बुढेसकालको अनुहार हेर्ने ‘फेसएप’ चलाउदा पछुताउनु पर्ला है !
केहिदिन भयो सामाजिक सञ्जला त्यसमा पनि फेसबुकका प्रयोगकर्ताले आफ्नो बुढेसकालको अनुहार सेयर गरिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग नजान्नेका लागी निक्कै ठूलो कुरा जस्तो देखिएपनि प्रयोगकर्ताका लागि भने बुढेसकालको खुम्चिएको अनुहार जस्तै पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने विशेषज्ञहरुको भनाइ छ । अनुहार बुढो भएको फोटो बनाउने एक एप हो । जसको नाम ‘फेसएप’ राखिएको छ ।यो एपले केहिक्षण खुसी दिएपनि दीर्घकालमा दु:खी बनाउन विशेषज्ञहरुको दाबी छ । उनीहरुले यो एपको प्रयोगकर्ताको डेटा असुरक्षित भइसकेकाले अब प्रयोग नगर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।
फेसबुकले पनि समयसमयमा जथाभावी एप्सहरु नचलाउँन भन्दै आइरहेको छ ।‘फेस एप ओल्ड फिल्टर’ एउटा यस्तो एप हो जुन उपयोगकर्ताको अनुहार परिवर्तन गरी बढी उमेर भएपछि कस्तो देखिन्छ भन्ने तस्वीर देखाउने काम गर्दछ । ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो एपको एउटा क्रेज नै चलेको छ । यसको उपयोग गरी आफ्ना तस्वीर पोस्ट गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् । यसका साथै सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न भने तपाई तयार हुनैपर्छ ।
सन् २०१७ मा पहिलो पटक रुसीहरुले ‘फेस एप’ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यही एप ‘आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स(एआई)’ का साथ अहिले फेरी भाइरल भएको हो । विश्वका केही चर्चित स्टारसहितका कयौ प्रयोगकर्ताले ‘ओल्ड फिल्टर’ मार्फत यसको प्रयोग नै गरेका थिए । प्रविधि सम्बन्धि जानकारी लिने अनलाईन ‘टेकक्रन्च’ का अनुसार तपाईको तस्वीरमा फिल्टर जोड्न एपले ‘एआई’ को प्रयोग गर्छ ।
एपमा रहेका विभिन्न फिल्टरका लागि सेल्फी सम्पादन एउटा न्युट्रल नेटवर्कमा निर्भर रहेको हुन्छ ।यसअघि ‘टेकक्रन्च’ को रिपोर्ट अनुसार पुरानो फिल्टर अब भाईरल बनेको छ । उसले लेखेको छ , ‘एपमा अन्य फिचर्स पनि छन, जस्तो की मुस्काउनु, अन्य फिल्टरका साथ युवा वा धेरै राम्रो देखाउनु । यो एप आईओएस र एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छन् । प्रविधि विशेषज्ञहरुले यो ‘फेसएप’ असुरक्षित रहेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार यो एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ‘नो’ अर्थात् अस्वीकृत गरेपछि पनि तपाईँको डेटासम्म पहुँच कायम राख्ने क्षमता राख्छ ।
एपलाई प्रयोग गर्ने स्वीकृतिपछि तपाईलाई ‘स्मार्ट’ बुढेसकालको तस्वीर देखाउन फिल्टर गर्छ । यसका लागि एपले तपाईका फोटो ग्यालरी मध्ये एउटा तस्वीरलाई सम्पादन गर्छ । यो गर्नका लागि यसमा एआईको उपयोग गरिन्छ ।विशेषज्ञ भन्छन्, ‘यसले तपाईको क्यामेरा रोलका सबै तस्वीरहरुमा एक्सेस प्राप्त गर्नुका साथै स्टोर गर्न सक्छ । कसैले तपाईँको कुनैपनि तस्वीरलाई आफ्नो अनुकुल बनाएर वा संशोसित गरेर गलत प्रयोग गर्न सक्छन् ।
’‘फेस एप’मा सुरक्षा चुनौतिहरु यथेस्ट रहेको ‘डेलीमेल’ ले विशेषज्ञहरुलाई उदृत गरी लेखेको छ । यो एप ‘एआई’ प्रविधिबाट चल्ने भएकाले तपाईँको फोन ग्यालरीमा भएको एउटा तस्वीरलाई दोब्बर वा तेब्बर उमेरको छविमा रुपान्तरण गर्छ । यसले तपाईको कपालको रंग, तपाईलाई दाह्रीवाल र युवा समेत देखाउन सक्छ ।यो एप सुचारु भएपछि तपाईका संग्रहित सामग्री र तस्वीरहरु बिना अनुमतिकै स्टोर गर्न सक्ने क्षमता पनि यसमा छ । यसको अर्थ तपाईको डेटा असुरक्षित हुनेभयो । यति मात्रै हैन तपाईको स्वीकृति बिनैपनि डेटाहरु अरुलाई बेच्न सक्छ । यस्तोमा अवस्था पीडित भए सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुहुनेछ ।
त्रा’सकाबीच खुशीको खबर : इजरायली सरकारले केही दिनमा कोरोना बि’रुद्धको औषधी विश्वभरी पठाउँने